Kansar: Dilaa Nooga Daran Dagaallada Hubaysan!!! – Goobjoog News
Kansar: Dilaa Nooga Daran Dagaallada Hubaysan!!!
Korriimada ay sameeyaan unugyada jirkeenna ayaa ka dhigan dhammaadka shaqooyin badan oo jirkeenna gudihiisa ka socdo, korriimada waxa ay martaa wadiiqooyin nidaami ah; billowga hore unugyada waa ay koraan, marka ay intii loogu talagalay ay gaaraanna waa la joojiyaa. Haddii uu mar kale dhaawac ku yimaado, waxaa lagu sameeyaa labo midkood: in la dayac tiro, ama in toos loo baabi’iyo. Qaabka uu u korayo unugga, iyo xiriirka kala dhaxeeya unugyadii kaleba, dhammaan waa qaab nidaamsan.
Kansarku waa koox cudurro ah oo lagu garanayo in unuggu uu korriimo aan nidaam aheen sameeyo. Waa uu korayaa, mana lahan hab lagu joojin karo korriimadaas, waxaana suurtagal ah in uu ku faafo qaybaha kale ee jirka. Kansarka waxaa ka soo horjeeda burooyinka waaweyn, oo aan ku faafin qaybaha kale ee jirka.
Astaamaha iyo calaamadaha lagu yaqaan cudurkan waxaa ka mid ah buruq, dhiig bax aan caadi ahayn, qufac, miisaanka oo yaraada; iyo isbeddel ku yimaada dhaqdhaqaaqa mindhicirka. In kasta oo astaamahani muujin karaan Kansar, haddana cudurro kale ayaa ay xiriir la yeelan karaan. In ka badan boqollaal nooc oo Kansar ah ayaa waxyeello u geysta aadanaha.
Isticmaalka tubaakada ayaa sabab u ah 22% dhimashada ka dhalata Kansarka. 10% kale ayaa u sabab ah cayilka, nafaqa-darro, jimicsi-la’aan iyo cabista Khamriga oo xad-dhaaf noqota.
Waxyaabaha kale ee cudurkan keena waxaa ka mid ah caabuqyada qaarkood, iyo shucaaca iyo hawada oo wasaqeysan. Qiyaastii 5-10% noocyada Kansarrada waxaa sabab u ah cillado hidde ah oo laga dhaxlo waalidka.
Kansarka waxaa lagu ogaan karaa wareysiga iyo u kuur-galka calaamadaha muuqdo iyo kuwa uu bukaanku sheeganayo, ka dibna waxaa laga qaadayaa sawirro muujinayo meesha waxa ku jiro (Imaging), ugu danbeynna waxaa lagu xaqiijinayaa in dheecaan ama cad hilib ah laga jaro meesha uu qofku xanuunka ka sheeganayo, oo baaritaan lagu sameeyo (Biopsy).
Kansarrada badan ayaa looga hortagi karaa joojinta sigaar-cabidda, ilaalinta miisaanka caafimaadka leh, yaraynta cabista khamriga badan, cunista khudaarta iyo miraha, iska tallaalista cudurrada qaarkood ee faafa, yaraynta cunista hilibka badan, iyo ka-fogaanshaha isku-dhigidda badan ee iftiinka qoraxda.
Kansarka waxaa badanaa lagu daaweeyaa daaweynta shucaaca (Radiation), qaliin, daaweynta kiimiko (chemotherapy), iyo daaweynta la beegsanayo xannuunka iyo maaraynta astaamaha. Fursadda noolaanshaha bukaanka qabo Kansarka waxay ku xiran tahay nooca Kansarka iyo xadka cudurka uu gaarsiisan yahay billowga daaweynta.
Maanta oo kale Sannadkii 2017, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) waxa uu sheegay in qiyaastii 90.5 milyan oo qof ay la nool yihiin cudurka Kansarka. Qiyaastii 14.1 milyan oo qof oo cusub ayuu ku dhacaa cudurka Kansarka sannad kasta. Taas waxa ay sababtay dhimashada 8.8 milyan oo qof. Qiimaha dhaqaale ee sannad walba ku baxa la-tacaalidda xannuunkan waxaa lagu qiyaasay $ 1.16 trillion USD, sida ay sheegtay warbixin soo baxday sannadkii 2010.
Sannadkii 2014-ka, ayaa waxaa ururka WHO laga soo xigtay in 5,400 oo qof ood Soomaali ah ay u dhinteen cudurka Kansarka, waxaana dadkaas u badan dumar oo tiradoodu ay gaaraysay 3200 oo qof. Taas ayaa kadhigan sadax jibaar dhimashada sanadkii 2016 ee ku dhintay dagaallada hubeysan kuwaas oo gaarayay 1400 oo qof sida ay qortay Goobjoog News.
Warbixinta ayaa waxa ay soo bandhigtay sida ay ragga iyo dumarku ugu kala badan yihiin noocyada kala duwan ee Kansarka; waxaana la sheegay in noocyada ugu badan Kansarka ee ragga ku dhaca ay yihiin Kansarka sanbabada, Kansarka qanjirada burusteedka; iyo Kansarka dhuunta. Dumarkanna waxaa la xusay in noocyada ku dhaca ay ugu badan yihiin Kansarka naasaha, kansarka ilma-mareenka; iyo Kansarka dhuunta.
Daraasada ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay isugu darsan tahay sadax cilad oo weyn kuwaas oo ah: 1. Wacyi-galinta oo aad u yar. 2. Qalabka baaritaanka cudurka Kansarka oo aan dalka oollin. 3. Iyo daweynta cudurka oo aan dalka ka jirin.
W/q: Dr. Cabdifataax Barre
Bachelor of Medicine and Suregeey (MBBS) & Bachelor of Public Health (BPH)
Barre213@Gmail.com, Mogadishu, Somalia
La soo xiriir: info@goobjoog.com
Maxay Kawada Hadleen Wasiirka Ganacsiga iyo Ganacsatada Gobolka Banaadir?
Dunida Oo Laga Xusayo Maalinta Cudurka HIV AIDS (Wareysi)
Madaxweynaha Jubbaland oo Kulan La Qaatay Safiirka Dowladda Qatar Ee Soomaaliya
Muqdisho: Dad lagu Qiyaasay 0.3% Oo La Nool Xanuunka HIV AIDS
Maxocum cialis 5 mg Amoxicillin Low Cost
Ukunbb hnwubm over the counter cialis cialis price walgreens
Wxbugj uqafzy Discount cialis canada online pharmacy
australia cheap viagra https://paradiseviagira.com cialis viagra levitra young yahoo
el viagra produce acostumbramiento https://purevigra.com jettbull bitkisel viagra
viagra at 7 11 viagra durata rapporto fast shipping for viagra
canadian pharmacy viagra cialis buy viagra on gold coast viagra canada pharmacy
hipertensГЈo viagra https://buybuyviamen.com/ should you take viagra everyday
receitas de viagra natural potenzmittel viagra generika side effects of womens viagra
price of 50mg viagra viagra sales sildenafil nz pharmacy
viagra cheapest pharmacy where to viagra online order sildenafil from canada
viagra for sale over the counter viagra cost usa buy real viagra online australia
can you buy viagra canada sildenafil citrate 50mg viagra over counter
viagra obmani no ostancia how long effect of viagra lasts anabolic steroids and viagra
viagra iskustva psych viagra falls zshare eu ja tomei viagra
argumentation and persuasion essay college essay expert compare and contrast essay
writing a college entrance essay research paper lessons compare and contrast essay high school and college
essay writing companies persuasive essay about homework college essays about failure
writing a valedictorian speech strong thesis statement completed coursework
most reliable viagra viagra per nachname bestellen whats is viagra super force
descriptive essay thesis statement custom essay service reviews buy a dissertation paper
thesis statement cause effect essay college essays that worked ivy law term paper
essay writing my friend key to writing a good essay buy admission essay
cheap writing paper help writing essays for college essay college scholarships
Dhaqaatiirta Oo Ka Digeysa Qatar Caafimaad Oo ka Dhalata Qashinka Lagu Shubayo Webiga Shabeelle
Fhkqpq fgycxn buy generic viagra...
drug store online canadian drug stores prices of viagra at w...
Lbeqle okljjb viagra online generic...
does tamoxifen affect immune system
does tamoxifen affect immune system https://tamoxifen.mrdgeo...
Jvosjk obkrwx sildenafil india...